Qualcomm inotenga Nuvia ye1400 mabhiriyoni emadhora | Linux Vakapindwa muropa
Qualcomm inotenga Nuvia ye $ 1400 bhiriyoni
Makambani makuru ari kukura nekuwedzera kutora mamwe makambani madiki kana kutanga. Kutenga kuri kuramba kuchiwedzera, nguva yega yega paine hofori dzinokura muhukuru nekuda kwekutenga uku, vashoma uye vashoma vatambi panhandare yekutamba. Chikamu chekupedzisira, chenguva, chave chiri kutenga kwawakaita Qualcomm.
Iyo chip hofori yaenda kunotenga kuwedzera "kungoro" kune iyo kutanga Nuvia. Kana "ichipfuura nepabhokisi" kufamba kwacho kwaenda nemari inosvika miriyoni imwe nemazana mana emadhora. Mutengo wakakodzera kukosha uchifunga kuti Nuvia ine ruzivo neakakwira-mashandiro eARM machipisi uye kuti ichakubatsira iwe kunatsiridza yako Snapdragon.
Mushure mechikamu cheiyo cKutengwa Kweruoko neNVIDIA, ikozvino kwauya kumwe kufamba uku haina rusununguko rwekupokana futi...
2 About Nuvia
Iyo hofori Qualcomm yakashamisa munhu wese nenhau dzeiyi yakawanda-mamirioni emadhora kutenga yekambani yechidiki Nuvia. Mari yakabhadharwa nehofori yekuAmerica yanga iri 1400 mamiriyoni emadhora, mutengo unokodzera kuti vagare nevashandi veNuvia uye zvakare nehunyanzvi hwavo. Chinhu chinosimbisa zvichaitika mune ramangwana zveiyo Snapdragon SoCs.
Mari yakakosha kwazvo inokwezva kutariswa kana ichienzaniswa nedzimwe nhamba dzezvimwe zvakatengwa, sezvo Nuvia ikambani yakavambwa mu2019, asi kunyangwe iri saizi nehudiki, ine gyakamhanya "nhaka" yemvumo, matekinoroji, uye mainjiniya iyo Qualcomm inowana inonakidza.
Haisi yekutanga kutenga iyo Qualcomm inogadzira, yatove yakaita kare zvimwe kutenga yakakosha kwazvo, senge AMD kupatsanurwa kwemifananidzo uye multimedia machipisi enhare mbozha (ATI Imageon) uye yakashanda sehwaro hwevane simba Adreno GPUs kuti izvozvi inosanganisirwa maSoC ayo.
Zvakanaka, kunyange hazvo mamwe midhiya achikurudzira kuti zvinongoshanda kuvandudza iyo Snapdragon yenharembozha, chokwadi ndechekuti Nuvia haikwikwidze mumunda iwoyo, asi yakanangana nemachipisi eHPC, ndiko kuti, kwenzvimbo dzedata. Iyo Nuvia Phoenix machipisi Izvo zvakagadzirirwa kunyatso kupa kuita kukuru uye kugona kwemaseva.
Ipapo? Zvakanaka, pamwe vanogona kubatsira muchikamu chemafoni uye vachadaro. Asi isu tiri kuonawo kuti Qualcomm ine ayo maratidziro akaiswa pane mamwe matunhu akadai MaPC uye HPC. Muchiitiko ichocho, Nuvia yaizove sarudzo huru yekuvabatsira neiyo yepamusoro-inoshanda Arm-based machipisi.
Nekudaro, Qualcomm akataura kuti chimwe chezvikonzero chikuru chekutora ndeche 5G tekinoroji. Yakataurawo zvingangoita mashandiro ekuita kune ayo SoC-akaisirwa maCUU uye simba rekushandisa kuzadzikisa zvido zveinotevera-chizvarwa 5G komputa.
Uye usakanganwa kuti Nuvia ane ruzivo mukugadzira microarchitecture zvichienderana ne ISA ARM, usingashandise Arm IP cores, ndiko kuti, senge zviri kuitwa naApple, pakati pevamwe, neayo Apple Silicon. Izvo zvaizopa Qualcomm rusununguko rukuru kukura zvigadzirwa zvemangwana zveiyo Snapdragon, kunyanya tichifunga kuti Arm yakatengwa neNVIDIA, mumwe wevakwikwidzi veQualcomm ...
Rangarira Qualcomm inoshandisa Krait uye Kryo cores yeiyo Snapdragon, iyo isiri chinhu chinopfuura semi-tsika shanduro dzeArm Cortex A-Series cores, iyo isingavabvise kure neIP cores zvakananga. Vari kufunga nezvekuvandudza yavo pachavo michina yakavakirwa paISA ARM kuti vasavimbe neIP cores? Zvakanaka, nguva ichataura ...
Kana iri kambani "isinganzwisisike" inonzi Nuvia, chokwadi ndechekuti vakaita nhau nekuyedza kwavo kukunda gore nemachipisi avo epamusoro-soro zvichienderana neIRA ARM, senge Nuvia phoenix. Zvakare, ivo vavambi havasi vausingazive zvachose ...
Nuvia yakavambwa nevatatu vekare vashandi veApple uye ndiani akatora chikamu mukugadzirwa kweA-Series machipisi eiyo Cupertino brand. Mazita avo ndiJohn Bruno, Gerard Williams, naManu Gulati. Pamusoro pemazita aya, vamwe vazivikanwi vakakura venyika yeLinux vaibatanidzwawo, saJon Masters (Red Hat), mumwe wevadziviriri vakuru veARM machipisi ekuita kwakanyanya.
Manu Gulati naJohn Bruno zvakare vane ruzivo rwakawanda kunze kweApple, senge basa ravo yeGoogle. Ikoko ivo vaive chikamu chechakakosha chip uye dhizaini dhizaini uye timu yekusimudzira yekambani. Neruzivo rwese irworwo vakauya kuNuvia vaine chinangwa chekugadzirisa indasitiri yegore pamwe neanoshamisa mashandiro / simba resimba rezvigadzirwa izvi.
Mhedzisiro yacho yaive Phoenix, chip ine macores ehukuru hwakaenzana uye mashandisiro kune ayo enhare mbozha, asi iine kuita kwakanyanya kwazvo. Zvese nekuda kwekukwenenzvera yako yake microarchitecture inokwanisa kuita iyo ARM kuraira yakatarwa, asi pasina kushandisa Arm-marezinesi kernels.
Chekupedzisira, hazvisi zvese zvinhu zvakanaka mukutenga uku. Izvo zvinouyawo seisinganzwisisike gakava. Uye ndezvekuti Apple neQualcomm vabatanidzwa muhondo yepamutemo yetitans yekumwe kupomedzerwa pakati pemakambani maviri kune mamwe ma patent uye matekinoroji.
Asi, mukufanana, Nuvia yakavewo neayo mamiriro epamutemo kurwisa Apple. Gerard williams, CEO uye muvambi weNuvia uye aimbova Apple, ane gakava nekambani yake yekare. Uyo ari muCupertino anomupomera mhosva yekutsvaga vamwe vechikwata cheApple vachiri kushandira Apple.
Tichaona kuti zvese izvi zvinogadziriswa sei mudare, kunyanya tichifunga kuti ikozvino Nuvia haisisiri yekutanga kuva chikamu cheiyo hombe Qualcomm, a dambudziko reapuro yehukuru hwakanyanya kupfuura zvaizivikanwa naNuvia panguva iyoyo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Qualcomm inotenga Nuvia ye $ 1400 bhiriyoni
LVL5: Vakatenga makwikwi ndisati ndavakanganisa uye iye akadonhedza bhurugwa rake